ဆက်သွယ်မှုပြသနာများရှိပါကသင်၏ Mac ၏ Bluetooth module ကိုပြန်လည်စတင်ပါ ငါက Mac ပါ
ဆက်သွယ်မှုပြသနာများရှိပါကသင်၏ Mac ၏ Bluetooth module ကိုပြန်လည်စတင်ပါ
Javier Porcar | | လဲ tutorial, အတော်ကြာ
သင့်တွင်နေ့စဉ် Bluetooth နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသောကိရိယာများစွာရှိကောင်းရှိနိုင်သည်။ ၎င်းကိုသင်ပထမ ဦး ဆုံးအကြိမ်ဆက်သွယ်ခဲ့ပြီး၎င်းတို့သည်ထိုအချိန်ကတည်းကပြproblemsနာများမရှိသောကြောင့်၎င်းကိုသင်မမှတ်မိရန်ပင်ဖြစ်နိုင်သည်။ ကျနော်တို့အခြားသူတွေအကြားကီးဘုတ်, ကြွက်, trackpads သို့မဟုတ်စပီကာအကြောင်းပြောနေတာပါ။ ဒါပေမယ့် Mac တွင်မဖြစ်နိုင်သည့် connection ပြproblemနာတစ်ခုစတင်လာပါက Bluetooth module ကို reset လုပ်ရန်လိုအပ်လိမ့်မည်။
ဒီအဆင့်ကိုမလုပ်ခင်၊ ချိတ်ဆက်ထားတဲ့အရံပစ္စည်းကိုလျှပ်စစ်စီးဆင်းမှု (သို့) တိုင်များဖယ်ရှားတဲ့နေရာကိုပိတ်ဖို့အကြံပြုလိုတယ်၊ ၄ င်းကိုဆက်ပြီးအတည်ပြုဖို့ထပ်မံဖွင့်ပါ။ သင်မဖြေရှင်းပါကဤအဆင့်များကိုလိုက်နာပါ။
ယခင်က iMac သို့မဟုတ် Mac mini ၏ကီးဘုတ်ကို Bluetooth နှင့် mouse နှင့် Trackpad တို့ဖြင့်ချိတ်ဆက်နိုင်သည်ကိုသတိရပါ။ ထို့ကြောင့်, သငျသညျဤအရံပစ္စည်းများအစားထိုးရှိရမည်, ဤကိစ္စတွင်အတွက် cable ကိုဆက်သွယ်မှုအားဖြင့်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ restart ပြန်လုပ်တဲ့အချိန်မှာသူတို့ offline ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်။ သင်ဤအရာကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားပါကပြန်လည်စတင်ရန်အဆင်သင့်ရှိသည်။
ပထမဦးစွာ Bluetooth သင်္ကေတသည်မီနူးဘားတွင်ပေါ်သင့်သည်။ မင်းမှာမရှိဘူးဆိုရင် အဲဒါကိုမှီငြမ်းရန် အောက်ပါအဆင့်များကိုလုပ်ဆောင်ရမည် -
သွားပါ System preferences.
ကို Select လုပ်ပါ ဘလူးတုသ်။
Pop-up ၀ င်းဒိုးမှာအောက်ခြေမှာပေါ်နေတဲ့ရွေးစရာကိုနှိပ်ပါ။ မီနူးဘားတွင် Bluetooth ကိုပြပါ။ Bluetooth သင်္ကေတသည် taskbar ပေါ်တွင်ယခုပေါ်လာလိမ့်မည်။
ထို့နောက်သင်ရမည် လျှို့ဝှက် Bluetooth menu ကိုမြွက်. Shift နှင့် Option (alt) ခလုတ်များကိုနှိပ်ပြီးမီနူးဘားမှ Bluetooth သင်္ကေတကိုရွေးချယ်ပါ။
သော့တွေကိုလွှတ်လိုက်ပါ၊ သင်လျှို့ဝှက် menu ကိုတွေ့လိမ့်မည်။
ထို option ကိုရွေးချယ်ပါ Bluetooth module ကိုပြန်လည်သတ်မှတ်ပါ။
နောက်ဆုံးအနေနဲ့ သင်၏ Mac ကို restart လုပ်ပါ။
reboot လုပ်ပြီးတာနဲ့ device အကြားဆက်သွယ်မှုပြproblemsနာတွေကိုဖြေရှင်းသင့်တယ်။
ဒီဘာဂ်မီနူးတွင်ကျွန်ုပ်တို့နောက်ထပ်မှတ်ချက်ပေးမည့်နောက်ထပ်ရွေးစရာနှစ်ခုရှိသည်။ ချိတ်ဆက်ထားသည့် Apple ထုတ်ကုန်အားလုံးတွင်စက်ရုံဆက်တင်များသို့ပြန်သွားပါ။ ဤကိစ္စတွင်၊ အက်ပလီကေးရှင်းများအားလုံးကိုစက်ရုံပြင်ပသို့ပြန်ထားပါ။ အကယ်၍ သင်သည်ယခင်ခြေလှမ်းများကိုအောင်မြင်မှုမရှိဘဲလုပ်ဆောင်ပြီးပြီဆိုလျှင်၎င်းသည်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရွေးစရာတစ်ခုဖြစ်သည်။
နောက်ဆုံးအနေနဲ့ ကိရိယာအားလုံးကိုဖျက်ပါဆက်သွယ်မှုပြproblemsနာများကြောင့်သို့မဟုတ်အခြားအနီးအနားရှိ Mac နှင့်ချိတ်ဆက်ပြီးဝင်ရောက်စွက်ဖက်ခြင်းမှရှောင်ရှားရန်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကိရိယာအားလုံးကိုဆက်သွယ်လိုလျှင်အသုံးဝင်သည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ငါက Mac ကပါ » Apple » အတော်ကြာ » ဆက်သွယ်မှုပြသနာများရှိပါကသင်၏ Mac ၏ Bluetooth module ကိုပြန်လည်စတင်ပါ
ကီးဘုတ်ကငါ့အတွက်အလုပ်မလုပ်ဘူး။ (မေ) ဘေးတွင် (alt-option) ကိုကျွန်ုပ်မထည့်နိုင်ပါက debug menu ကိုမည်သို့အသုံးပြုနိုင်မည်နည်း။
အယ်လီနာ Fdez ။ ဟုသူကပြောသည်
Preferences panel ကနေ Bluetooth option ပျောက်သွားရင် ????
Elena Fdez အားပြန်ကြားပါ။
Andres Saldarriaga ဟုသူကပြောသည်
ကျွန်ုပ်၏ IMAC သည် bluetooth ကိုရုတ်တရက်ပိတ်ထားပြီးတစ်နေ့တာအကြိမ်ပေါင်းများစွာ ... ၎င်းသည်အဘယ်ကြောင့်ဖြစ်ပျက်သည်ကိုသင်သိပါသလား။
Andrés Saldarriaga အားပြန်ပြောပါ
Bluetooth မရရှိသေးပါကကျွန်ုပ်အားထင်ရှားခဲ့သော်လည်း၎င်းသည် shortcut ဖြင့် debug option ကိုပြသခြင်းမဟုတ်ပါ။ အခြားနည်းလမ်းတစ်ခုရှိပါသလား။
Norbey Felipe လိုပက်ဇ် Avila ဟုသူကပြောသည်
နေ့လည်ခင်းသူငယ်ချင်းကောင်း၊ မင်းတို့ဒီပြtoနာရဲ့အဖြေကိုသိလား။ အဲဒီလိုပဲငါလည်းဖြစ်လာတယ်
Norbey Felipe Lopez Avila အားပြန်ပြောပါ
မင်္ဂလာပါ၊ ၎င်းသည် Bluetooth မရရှိနိုင်ဟုဆိုသည်၊ သို့သော်၎င်းသည်ကျွန်ုပ်အား debug option မပြသပါ။ အခြားနည်းလမ်းတစ်ခုရှိပါသလား။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
Luis Sanda ကိုပြန်ပြောပါ
မတ်လ ၂၇ ရက်နေ့မှာ Apple ကဟာ့ဒ်ဝဲထုတ်ကုန်တွေကိုမတင်ဘူးဆိုရင်ကော။
အခုဆိုရင် Apple Pay ကိုသုံးပြီး Model3ကိုကြိုတင်မှာယူနိုင်ပါတယ်